Ingathatha ixesha elingakanani iMask? Ngaba kunyanzelekile ukuba ugcine iiMaski?
Ingathatha ixesha elingakanani iMask? Ngaba kunyanzelekile ukuba ugcine iiMaski? Ngenxa yesithsaba somoya omtsha inyumoniya, iimaski zinxitywe phantse isiqingatha sonyaka. Ukuza kuthi ga ngoku, nangona ubhubhane ungadluli, kwezinye iimeko, nangona iimaski zinokususwa ngokufanelekileyo, asinakukushiya ngokupheleleyo ...